Ngathi | Imbuyekezo Yueqing Tailei Electric Co., Ltd.
Yueqing Tailei Umbane Co., Ltd. Ngomnye wabenzi abakhethekileyo beVoltage stabilizer ngaphezulu kweminyaka eli-15 yamava.I-voltage stabilizer, isiguquli , umkhuseli wevolthi kunye nesilawuli sokuhambisa esidlidlizelayo zezona mveliso zethu ziphambili.
I-TAILEI ineqela elomeleleyo le-R & D kwaye malunga Abasebenzi abali-150 kwaye ngaphezulu kwesikwere ezingama-8000 Indawo evelisa iimitha, enezona ndawo zokuvelisa ziphambili kubandakanya iPBB, iTransformer, iTreyi, iThuluzi, iNaliti yePlastiki, iMetro Sheet, iSilkscreen, iiNdibano zeNdibano, kunye neeNdibano zeNdibano ezi-6. Inkampani yethu iyakwazi ukubonelela ngemveliso enomgangatho ophezulu ngamaxabiso aphantsi kakhulu. i iindibano zocweyo zale mihla kwaye izixhobo imveliso phambiliNgaphandle koku sihlala sizisa iteknoloji ngokuqinisekileyo, uhlengahlengiso lobugcisa ngokuqhubekekayo. Okubalulekileyo kukuba sinako 5 iqela leengcali kunye nelabhoratri ezinikeleyo yokuvavanya iimveliso .Sisebenzisa imali kunye namandla ekungeniseni nasekuphuhliseni imigca yeemveliso eziphambili kunye novavanyo lwetekhnoloji yolawulo lomgangatho, olufezekisa ukuthembela kubathengi bethu.
Yonke imveliso iyilelwe ukuhlengahlengisa owona msebenzi wokugqibela ukuze abathengi bethu bazive bekhululekile ukuyisebenzisa. Senza uphando lweemarike, sifunde imeko eyahlukeneyo yokusetyenziswa, sikhuthaze iziphumo zethu kwilebhu, kwaye siyivavanye ngaphambi kokumiliselwa kwintengiso. Sihlaziya umbono wabantu ngamandla acocekileyo kwaye sifikelela kwinqanaba elitsha minyaka le.
Sibonise ukuba siphumelele ekukhonzeni abathengi bethu kwiminyaka engama-35 edlulileyo. Ukunyamezela kwethu kunye nokuhambelana kwenkonzo kusinika ukuthembeka okukhulu: ukuza kuthi ga namhlanje sele sibonelela ngeemveliso kubathengi abangaphezulu kwama-700 abavela kumazwe angama-95 kwihlabathi liphela.
Ngoyilo, ukuxhaphaza, kunye nemveliso eqhagamshelene ngokungena ngaphakathi kwinkqubo yokusebenza, siphumelela igama elifanelekileyo kubathengi. I-ISO9001: 2008 kwaye uzuze nge I-CE, i-PCT kunye neROSH, SONCAP, SASO Sikwabonelela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM yobungcali ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo ngabathengi bethu.Sigxininisa kuqeqesho lwabasebenzi, ukuphuhlisa iimveliso ezintsha ezisekwe kwitekhnoloji kunye nokusebenzela uluntu. Sinqwenela ukuba sakhe ikamva elihle kunye nani.
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iingcebiso - iveliso ezifakiwe - Imephu yendawo - Indawo ekuSelfowuni Voltage Stabilizer Ekhaya liphela, IDigital Voltage Stabilizer yeAc, 2kva Voltage Stabilizer, Voltage kungako Isixhobo, Qaphela i-Voltage Stabilizer 5000va, I-4kva Voltage Stabilizer, Zonke iiMveliso